‘बानि ब्यवहार सुधारौं, दुरी कायम गरौं नत्र फेरी लकडाउनको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ’- जोस भ्याण्डेलर | News Polar
न्यूजपोलार श्रावण २२, २०७७, बिहिबार
नेपाल सरकारले लकडाउनलाई हटाएपछि संक्रमणको दर झनै बढ्ने संकेत देखिएको छ । काठमाडौं उपत्यका लागायत देशका मख्य ठूला सहरहरुमा समुदाय स्तरमा संक्रमण देखा परेको छ । संक्रमण दर पनि बढ्दै गएको छ । लकडाउन खुलेसँगै मानिसहरुको आवागमन पनि बढेको छ । संक्रमितहरु एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाँदा संक्रमण फैलिने सम्भावना बढेको छ । यसलाई पछिल्लो समय समुदायमा संक्रमणका केसहरु देखिनुले पुष्टि गरेको छ । यति नै बेला सरकारले गलत समयमा लकडाउन गर्ने र गलत समयमा खोल्ने काम गरेको भन्दै आलोचना गर्नेहरु पनि धेरै छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपालमा कोरोनाको अवस्था बारे कसरी हेरीरहेको छ । के नेपालमा महामारी फैलने खतराको संकेत देखा पर्न लागेको हो ? लकडाउन फेरी आवस्यक छ ? यीनै प्रश्नसहित विश्व स्वाथ्य संगठनका नेपाल प्रमुख डा। जोस भ्याण्डेलरसँग न्यूज एजेन्सी नेपालका संबाददाता सबिन धमलाले गर्नुभएको कुराकानी ।
समुदायहरूमा भइरहेका घटनाहरूलाई हेर्दा केही हदसम्म संक्रमण फैलिएको हो, तर व्यापक रूपमा संक्रमण फैलिसकेको छ भनेर हामीले भन्नु हतारो हुन्छ । स्थानीय तहहरूमा, तपाईले भने जस्तै कही कतै यात्रा नगरेका व्यक्तिहरू पनि विस्तारै संक्रमित भइरहेका छन् । हामीले अझ गहिरिएर विश्लेषण ग¥यौँ भने, आफैँ यात्रा नगरेका तर यात्रा गरेका व्यक्तिहरूको नजिकको सम्पर्कमा आएका धेरै व्यक्तिहरू भेट्न सक्छौँ । सबैको हकमा यो लागू नहोला तर आफैँले यात्रा नगरेका धेरै संक्रमितहरूको यात्रा गरेकाहरूसँगको सम्पर्क देखिन्छ । यसो भनिरहँदा, समुदायस्तरमा संक्रमण फैलिएकै छैन भनेर हामीले भन्ने खोजेका होइनौँ । केही स्थानहरूमा समुदायस्तरमा संक्रमण देखिएको छ, तर ती स्थानहरू स्थानीय स्तरमा रहेका छन् ।
यसरी हेर्दाखेरी विश्व स्वास्थ्य संगठनले यो अवस्था आउने बारे सरकारलाई सचेत त गराएको देखिएन, कि गराएको थियो ? के तपाईलाई सम्झना छ ?
तपाईले अहिले भर्खरै भन्नुभएकै कुरालाई म अर्कै तरिकाले सोध्न चाहन्छु । हामी सम्भावित जोखिमको अवस्थामा छौँ, यो स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि औपचारिक रूपमा भनिसकेको छ । अब यो अवस्था आउन नदिन अर्थात् सम्भावित विस्फोट हुन नदिनको लागि के गर्ने ? के लकडाउन उपाय हुन सक्छ ?
साथै, लकडाउन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा पनि विविधता रहेको छ । पूर्ण लकडाउन गर्ने कि आंशिक भन्ने विषयमा । के के कुरा चल्न दिने रु मेरो विचारमा, हामीले लकडाउनबाट के कुरा हासिल गर्न खोजेका हौं भन्ने विषय निर्धारण गर्दा यी सबै निर्णयहरू उपर ध्यान दिनुपर्दछ । लकडाउन विकल्प त हुँदै होइन । सरकारले लकडाउन खुकुलो बनाउन शुरू गर्दै गर्दादेखि नै हामीले आवश्यक परेमा पुनः लकडाउन गर्ने विकल्प हुनुपर्दछ भनेर भन्दै आएका छौं । लकडाउन सम्बन्धी निर्णय लिनु एक गाह्रो काम हो । यो स्वास्थ्य क्षेत्रसँग मात्रै सम्बन्धित निर्णय होइन, स्वास्थ्य क्षेत्रले डोहोर्याउने निर्णय भने पक्कै हो । यदि महामारीको अवस्था छ भने, लकडाउनले भाइरसलाई फैलिनबाट रोक्छ । तर यसको अर्थतन्त्र, सामाजिक जीवन र अन्य पक्षमा अन्य धेरै प्रभाव हुन्छ । र यो सन्तुलनको विश्लेषण सरकाले गर्नुपर्दछ । त्यसैले हामीले गर्नुपर्ने काम हामीले गर्यौ भने, कडा वा लामो लकडाउनको आवश्यकता कम हुनसक्छ । यदि हामीले राम्ररी व्यवहार गरेनौं भने, सरकारले केही हदसम्मको लकडाउन गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।
प्रकाशित : श्रावण २२, २०७७, १२:२७:२७
सरकारले गल्ति गरेको छ नै त्यसको प्रतिरोध गर्ने शक्तिपनि अगाडि आएनन् : भट्टराई
नेपाली मानसिकतामा परिर्वतन आएको छैन, चेतना र सोचमा अझै परिवर्तन हुनु जरुरी छ : कानूनमन्त्री तुम्बाहाङ्फे